Dowladda iyo qaxootiga suuqa shaqada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dowladda iyo qaxootiga suuqa shaqada
La daabacay fredag 11 september 2009 kl 15.42
Sabuni oo soo bandhigtay qorshaha cusub ee suuqa shaqada dadka cusubi ula qabsan lahaayeen foto: Bertil Ericson -Scanpix
Wasiiradda sinaanta iyo is dhexgalka dalkan Sweden Niyamko Sabuni ayaa soo bandhigtay qorshaha cusub ee dowladdu ku dooneyso siddii ay dadka ku cusub wadankan ay ula qabsan lahaayeen suuqa shaqada. Waxaana maanta ay gelinkii hore kaga hadashay arrimahaasi shir jaraa’id oo ay qabatay.
Dowladda iyadoo adeegsaneysa xafiiska shaqada ayey la wareegi doontaa mas’uuliyadda dadka wadanka ku cusub ee u baahan iney suuqa shaqada la qabsadaan, taasoo degmooyinkuna ay gacan ka geysanayaan. Qorshan ayaa waxaa kaloo kamid ah in shaqo wax qabad wanagasan leh qofkii qabta la siinn doono gunno, mana ahan mid saameyn kale ku yeeleyneysa dhaqaalihiisa kale ee shaqsiyaadka barnaamijkan ka qeyb qadanaya.
Sabuni waxaa ay sheegtay in degmo kasta ay mas’uul ka saaran tahay siddii ay ugu hagi laheyd dadka sharciga ka koobnaanayo. Dadkuna waa iney ogyihiin bey tiri demoqraadiyadda macnaheeda, sinaanta iyo ixitiraamka guud ee dadka ka dhaxeeya iyo in dadku wada siman yahay ee aaney kala qiimo badneyn.